Mode pamusoro ngarurege: Zvizere hydraulic
Mapaipi dhayamita: 125mm
Kana kushandisa, zviri ancred pasi pamwe initiallly vakagadzirira maburi. Kana zvinodikanwa kusimuka, shongwe kondo unodiwa kusimudza ukaisa tiguu kusvikira raitevera pauriri dzakakwirira nokuti anchored.one nguva kukwira kunogona zvinodiwa nekongiri ukaisa kuti uriri maviri.
Compact design, nyore kuvhiyiwa, yakavimbika kuchengeteka uye akakodzera kuvakwa mukuru chivakwa
chinhu HGY28-3M HGY32-3M HGY32-4M
mhando Floor Fixed Self Climbing
chinjikira Reach 28m 32m 32m
simba 11 22 22
Inner dhayamita Φ125mm
uremu 18.5t 19.5t 19.6t
chiputiriso 40HQ * 2 40HQ * 2 40HQ * 2
The arced tiguu Murongerwo iri optimized nokushandisa CPU magadzirirwo. The tiguu kushandisa mukuru-simba simbi yairema kuti kugadzirwa pamwe nesayenzi muitiro. Mupepa chitarisiko, mukuru Rigidity uye kukura, kuona wakanakisisa uye yakavimbika unhu.
B. Hydraulic maitiro
G akatevedzana zvigadzirwa wokurera nyika yakakurumbira Germany Rexroth mafuta pombi, Proportional vharafu
(pamwe uchishandisa mubato) nokudzikama vharafu pamwe nokupararira chesekondari, apo C uye E akatevedzana
zvigadzirwa kushandisa Germany Rexroth solenoid achitaura kudzora vharafu nokudzikama vharafu
pamwe dzakayerera yechipiri. It zvinobudirira kudziviswa dzingangoitika kukuvadza ose tiguu
iyo inogona kukonzerwa pamusoro nokukurumidza kufamba kana kuwedzera anodonhedza pasi, uye pakarepo
kuwedzera mafuta humburumbira kuti kumanikidzwa pasi zvokunze mauto, saizvozvo rakavimbika tiguu
Inner hydraulic mafuta tangi inoshandura chitsidzo marongerwo uye vakasununguka swivel. Rinopa guru
dzinokodzera naro, dismounting uye kugadzira, izvo nechokwadi refu basa
upenyu uye kwazvo unongotaura.
Somunhu rectangular puranga chimiro, ari kukwira nzvimbo iri kuchinja, hwakavimbika uye zvakakunakira
E. Slewing Mechanisation uye yokuderedza
Slewing yokuderedza wokurera zvigadzirwa kwakaitwa nyika akakurumbira muchiso kweItaly syöminen, pamwe
munhu torsion kukuru. Muchisimbiswa pamwe chete Integrated slewing nepakati vharafu chakaitwa
Germany Hawei, izvozvo inowana ishande uye hwakavimbika uye irambe unongotaura.
G akatevedzana zvigadzirwa vave indasitiri-oga analogue Wireless kure controller chakaitwa
Germany Hetronic, pamwe Proportional vharuvhu chakaitwa Germany Rexroth, zvinoita kufamba wakatsetseka, hydraulic kwechirwere shoma, uye kuita yakavimbika. Kunze kwaizvozvo,
zvinoita zvibvire stepless nokukurumidza murau Multi tiguu uye slewing kudyidzana, izvo kunowedzera basa kunyatsoshanda kwazvo.
■ C uye E akatevedzana zvigadzirwa vave indasitiri-oga analogue Wireless kure controller chakaitwa Taiwan TELECRANE ndiro nyore uye zvakakunakira ishande, zvikuru husingakwanisi
kuvhiringidza uye yakavimbika mukuita.
■ nechimwe dzakatevedzana dziri pamwe chete that no wired kure controller dzokushandisa zvakafanira.
The yemagetsi kuzvidzora hurongwa kushandisa nyika yakakurumbira muchiso pamusoro dzemagetsi zvinoriumba, zvakadai
se Japanese Omron uye French Schneider. The Multi kudzivirirwa otomatiki iri akamisa
purogiramu kudzorwa, kuti vadzivise misoperation uye nechokwadi rakavimbika mugadziriro wacho.
Mbiru chakagadzirwa mukuru-simba simbi yairema mu mativi chimiro, pamwe vakanaka pakuonekwa,
rigidness uye zvikuru, uyewo kumusoro rakavimbika.
Previous: Mira kongiri ukaisa tiguu HGY28
Mira kongiri ukaisa tiguu HGY28
Mira kongiri ukaisa tiguu